Bogga ugu weyn 15 Websaydh Ugu Fiican Si Aad Ugu Daawato Filimaanta Tiyaatarada Si Bilaash Ah 2022
Halkan waxaa ah war wanaagsan oo loogu talagalay dadka jecel filimada iyagoo raadinaya mareegaha si ay u daawadaan filimada masraxa ee ugu wanaagsan iyo bandhigyada TV -ga lacag la'aan.
Waxaan soo diyaarinay liistada mareegaha ugu fiican oo aad ku daawan karto filimada masraxa ee aad ugu jeceshahay internetka adigoon lacag ku bixin.
Sii wad akhriska si aad wax badan uga ogaato iyaga.
Adeegyada qulqulka ayaa caan noqday. Waxay leeyihiin maktabado filimaan qasab ah iyo bandhigyo TV ah haddii aadan ka taxaddarin inaad aakhirka qarashgareyneyso tan lacag ah.
Haddaba, maqaalkan si taxadar leh ayaa loo qoray si uu kaaga caawiyo inaad ku raaxaysato wakhtiga firaaqada ah daawashada filimada aad ugu jeceshahay lacag la’aan. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad iska diiwaan geliso meesha loo baahdo.
Waa kuwan websaydhada ugu wanaagsan ee si toos ah ugu qulquli kara filimada masraxa:
Filimaanta Documentary -ga ugu sarreeya
Filimka Classic Classic
Filimaanta Filim Bilaashka ah
#1 Watch Free
WatchFree waa degel kale oo tiyaatarka filimada tiyaatarka ah oo leh filimaan badan iyo bandhigyo TV.
Websaydhku wuxuu leeyahay interface soo jiidasho leh oo mar walba soo jiidan kara indhaha dadka isticmaala. WatchFree wuxuu ku siinayaa fikradda ah inaad had iyo jeer ka heli doonto filim kasta oo aad ka raadinayso server -keeda waana sax sababtoo ah mareegtu waxay soo bandhigtay filimaan aad u badan.
Sidoo kale, WatchFree waa mid ka mid ah bogagga qulqulka filimka oo maalin walba cusbooneysiiya uruurintooda. Marka, haddii aadan heli karin filimkaas la sii daayay maanta, dib u hubi berri oo waa la heli doonaa.
YouTube -ka ayaa ku qulqulaya hal -abuurayaasha maadada, kuwa wax qora, iyo xitaa waxyaabaha asalka ah. Si kastaba ha noqotee, waxa laga yaabo inaysan dadku ogeyn ayaa ah in YouTube ay sidoo kale bixiso maktabad filimaan iyo bandhigyo TV ah oo ka baxsan YouTube Originals.
Maktabaddeeda internetka dhexdeeda, waxaa ku jira xulasho filimo oo aad si buuxda u daawan karto si bilaash ah. In kasta oo maktabaddan bilaashka ahi aysan ahayn tan ugu weyn liiskan, waxaad ka heli doontaa filimaan argagax leh, majaajilooyin, ficil ficil, riwaayado, iyo xitaa filimada carruurta. Eeg sida loo helo tigidhada shaleemada oo jaban ama bilaash ah.
FlixTor waa degel aad u fiican haddii aad rabto inaad daawato filimadii masraxa iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyada oo aan la kala dhexgelin xayeysiisyada iyo soo-bixitaannada, oo ay weheliso dhibaatooyin is-qoritaan.
Halkaan, waxaad ka daawan doontaa dhammaan wixii shabakadu ku bixin karto bilaash; laga bilaabo noocyada ku farxi doona oo kaa naxaya ilaa noocyada jaan -goyn doona lafahaaga maadayska ah. Wax kasta oo aad niyadda ku hayso, FlixTor ayaa adiga kuu ah.
Kaliya booqo websaydhka oo sahaminta fursadahaaga ilaa aad ka hesho xulashadaada oo guji ciyaarta - taasi waa mid fudud. U fiirso qulqulka bilaashka ah ee aan dhibka lahayn!
Netflix ma noqon karto kanaal filim oo bilaash ah laakiin waxay bixiyaan qiimo dhimis arday - Halkan ka hubi sida ugu fiican qiimo dhimis Netflix bixisaa
Haddii aad jeceshahay filimada farshaxanka leh ama filimada caadiga ah, Kanopy waa goobta ugu fiican ujeeddooyinkaaga qulqulka filimada bilaashka ah. Iyada oo ay jiraan waxyaalo qaali ah oo ka socda Ururinta Qiimaynta iyo farshaxannada casriga ah ee indie, Kanopy waxay ku dadaaleysaa inay hesho shineemo tayo sare leh oo aad loo amaanay qolalka fadhiga dadka, dhammaantoodna wax kharash ah ma leh.
Crackle wuxuu ka mid yahay magacyada sare ee shabakadaha qulqulka bilaashka ah ee aan u baahnayn inaad is qorto. Waxa kale oo ay taageertaa qulqulka bilaashka ah ee dhammaan aaladaha iyada oo aan laga hor istaagin xayeysiisyada xannibaya waxyaabaha socda.
Taasi waa, waxaad ku daawan kartaa softiweerka macruufka ee android, laptop, kiniin, ama telefishankaaga caqliga leh.
Marka, kaliya ka dhex raadi ikhtiyaarrada hodanka ah ee hodanka ah ee ay soo bandhigtay, ku turunturoobo waxaad doorbideyso, oo si toos ah u dhex gal madadaalada shineemada.
Vumoo waa mid ka mid ah shabakadaha ugu caansan ee lacag la’aan lagu daawado filimada tiyaatarada. Qaybta ugu wanaagsan ee degelkan waa inay tan oo dhan qabato iyada oo aan la haynin xisaabin samaynta xisaabaad ama lacag bixin kasta oo hor istaagi doonta waayo -aragnimadaada xiisaha leh.
Xaqiiqdii, waxay ku siinaysaa marin u hel dhammaan filimada iyo barnaamijyada ay warshadaha warbaahintu bixiyaan.
Hadda, in kasta oo websaydhku uusan lahayn shaandhooyin badan oo ku saabsan noocyada, haddana wuxuu leeyahay aragtiyo faahfaahsan oo ku saabsan agaasimayaasha, waqtiga orodka, iyo qiimeynta filimada.
Si kastaba ha ahaatee, nuxurkiisa tayada sare leh iyo helitaankiisu fudud yahay ayaa ka mid ah sababaha badan ee mareegaha loo wada jecel yahay oo inta badan la isticmaalo.
#7 Fiiri Fiiri
LookMovies waa mareegaha filimada masraxa oo halkan u jooga inay riyadaas rumowdo oo kuu oggolaato inaad ku raaxaysato xulashada waxyaabaha kala duwan.
Ma jiraan wax soo baxay, xayeysiis la'aan, saxiixyo la'aan, xisaabaad la'aan, dhib la'aan-kaliya filimo duug ah iyo sitcom, dokumentiyo, iyo barnaamijyo sugaya in la baaro oo laga fiiriyo mareegaha.
Marka, kaliya gal websaydhka oo ka dooro ururinta aan dhammaadka lahayn ee ay tahay inay bixiso.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dib -u -dhac halkan ku jira kaas oo ah shakiga yar in ururinta ay ku jiri doonto dhammaan sii -dayntii ugu dambeeyay si aad ugu raaxaysato raaxada sariirtaada.
Si kasta oo ay ahaataba, LookMovies waxay siisaa isticmaaleyaasheeda khibrad aad u wanaagsan.
Baadhid Sida Lacag Loogu Helo Si Aad U Daawato Filimada Calaamadaha. Ka Hel $ 1,000 Filim
PopcornFlix waa degel caan ah oo ka mid ah websaydhada qulqulka filimada bilaashka ah waxayna halkaas u joogtaa dhammaan sababaha saxda ah-ka kooban tayo sare leh, qulqul la'aan is-qoritaan la'aan, ma jiraan wax soo-bax ah oo joojinaya, noocyo kala duwan oo filimo iyo bandhigyo TV ah oo laga dooran karo- kaliya magacow. PopcornFlix waxay halkan u joogtaa inay madadaaladaada ka dhigto intaas oo kaliya - madadaalo iyo madadaalo aan dhib lahayn.
Sidoo kale, PopcornFlix waxaa si aad ah ugu talinaya dhowr qof oo daawadayaal ah, waxay magac wanaagsan ku leeyihiin degelkeeda, waxaana aaminay dad badan. Waxa kaliya ee kuu hadhay ayaa ah inaad hesho salool oo isla markiiba ku booddo.
5movies waa mid ka mid ah goobaha ugu sarreeya ee qulqulka filimada. Haddii aad jeceshahay riwaayadaha Aasiya, hubaal waad ku jeclaan doontaa halkan maxaa yeelay waxaad ka heli doontaa websaytka riwaayado badan oo Aasiya ah oo aad sii qulquli karto adigoon is qorin.
Sidoo kale, websaydhka 5movie wuxuu bixiyaa taxane bilaash ah, filimo, bandhigyo TV, iyo anime. Waxay leedahay xawaare durugsan oo dheereeya iyo shaashad buuxda. Xaqiiqdii, 5movies waa degel si ay u sii daayaan waxyaabaha ku jira warbaahinta oo leh dib-u-dhac yar.
Haddii aad tahay qof anime ah, markaa Viewster waa degel si aad u sii deyso filimada masraxa anime oo lacag la'aan ah adiga oo aan ka walwalin is -qoritaanka. Ka sokow filimada anime, Viewster sidoo kale waa il wanaagsan oo ka mid ah filimadii ugu dambeeyay ee Hollywood/Bollywood.
Si kale haddii loo dhigo, in kasta oo inta badan ururinta Viewster ay ka kooban yihiin fiidiyowyo anime, haddana goobtu waxay sidoo kale bixisaa filimo ka kooban qaybaha sida ficilka, sayniska, riwaayadaha, majaajilada, xiisaha, iyo qaar kaloo badan.
Saddex iyo toban sano iyo tirinta (Viewster waxaa la aasaasay 2007), oo mareegtu kuma guuldaraysan inay siiso dadka daaha filimada tayo wanaagsan iyo filimo xiiso leh.
#11 Filimada Documentary -ga ugu sareeya
Sida magacu tilmaamayo, Filimada Documentary -ga ah ee ugu sarreeya waa hal degel oo aad ka daawan karto filimada masraxa dokumentiga onlayn. Sidaa darteed, haddii aad raadineyso filim caafimaadka aadanaha, deegaanka, ama xitaa bannaanka, had iyo jeer wax baa halkan kuu yaal.
Websaydhku wuxuu kaloo soo bandhigayaa qaar ka mid ah filimada dokumentariga ugu fiican ee aad ka heli karto internetka oo daboolaya mowduucyo aad u ballaaran, dhammaantoodna waa gebi ahaanba bilaash.
Tubi TV waa mareegta qulqulka filimka masraxa oo u saamaxaya dadka isticmaala inay helaan filimo bilaash ah iyo taxanaha TV -ga iyo bandhigyada. Waxay leedahay kumanaan barnaamijyo ah oo loogu talagalay in laga daawado aalad kasta illaa inta ay leedahay xiriirro internet. Shabakadda Tubi TV waxay kaloo leedahay barnaamij aad ka soo dejisan karto taleefankaaga casriga ah ama kiniiniga.
Waxaa jira filimo kala duwan iyo bandhigyo telefishan oo aad ka daawan karto TV-ga Tubi min miisaaniyad hoose ilaa filimo xanbaarsan. Waxay sidoo kale siiyaan aflaamtooda tayo wanaagsan si ay u sahlaan daawashada indhaha dadka isticmaala.
Haddaba si aad ugu raaxaysato waayo -aragnimada TV -ga Tubi, waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad is -qorto - oo bilaash ah. Marka tan la dhammeeyo, waxaad ku raaxeysan doontaa dhammaan waayo -aragnimada Tubi TV oo ay kujirto u oggolaanshaha isticmaaleyaasha inay is waafajiyaan dhaqdhaqaaqyadooda iyo aflaamta ay jecel yihiin ama barnaamijyada dhammaan aaladaha. Tani waxay ka dhigan tahay inaad ka soo qaadan karto filimadaada ama bandhigyada TV -ga halka aad uga tagtay markii ugu dambeysay ee aad sii daayay
#13 Cinema Classic ah Online
Classic Cinema Online waa degel kale oo qulqulaya halkaas oo aad ka daawan karto filimada masraxa oo aad daawan karto. Si kastaba ha ahaatee, waxay ka hadlaysaa oo kaliya filimada caadiga ah.
Waxaa jira noocyo filim oo badan oo lagu daawado boqolaal filim oo duug ah oo duug ah oo loo heli karo in lagu sii qulqulo goobta. Filimadani waxay leeyihiin taariikho u dhexeeya 1940 iyo 1970.
Sidoo kale, ogow inta badan filimada goobta ku jira waxay ka yimaadaan goobo kale oo sharci ah. Tani waxay ka dhigan tahay inay ku dhejiyeen xiriirro ka yimid goobo kale halkan. Sidaa darteed, kuwani waa kiisaska leh xiriiro jaban oo madasha ah. Dib -u -dhacan ka sokow, shineemada caadiga ah ee onlaynka ah waa shabakad qulqulka filimka tiyaatarka oo heer sare ah.
#14 Filimaanta Filimada Bilaashka ah
Shaneemada bilaashka ah waa mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya ee laga daawado. Asal ahaan waxay bixisaa madal kor u qaadaysa caannimada filimada miisaaniyad yar iyo taageereyaasha. Taasi waa, Shineemada Aflaanta Bilaashka ah waxay siisaa filimaanta la doortay oo keliya isticmaalayaasha.
Sidoo kale, looma baahna diiwaangelin ama xubinnimada mareegaha halkan. Xitaa uma baahnid inaad wax filim ah ka soo degsato mareegaha. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad doorato filimka indhahaaga qabanaya oo dooro ciyaar.
Intaas waxaa sii dheer, waxaad ka heli doontaa isjiidka iyo dib u eegista filimada caanka ah Filimaanta Filimada Bilaashka ah. Sidoo kale ogow inkasta oo goobtu sheegato inay bixiso aflaamta Hollywoodka, haddana inta badan aflaanta goobta ma aha kuwo ka yimid.
Vudu waa mareegta qulqulka filimka tiyaatarka oo leh nuxur bilaash ah oo qaali ah. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad iska diiwaangeliso websaydhka Vudu si aad u daawato filimadaas. Si kastaba ha noqotee, xitaa koonto lacag la'aan ah, weli waxaa jira tiro filimo iyo bandhigyo TV ah oo aad daawan karto. Laakiin haddii aad rabto inaad ku raaxaysato filimada xannibmay ee ugu dambeeyay, waa inaad iibsataa ama kiraysataa (taasi waa waxa ugu sarreeya).
Vudu waxa kale oo ay leedahay isdhexgal isticmaale-saaxiibtinimo kaas oo sahlaya in la baadho waxa ku jira. Halkan, filimada iyo bandhigyada telefishinka waxaa loo habeeyey qaybo taasoo sahlaysa helitaankooda.
Markaa, koonto lacag la'aan ah, waxaa jira filimo kala duwan oo aad daawan karto -filimada duugga ah ee caadiga ah, filimada Hollywood, iyo wixii la mid ah, laakiin waa inaad u dulqaadataa hal dib -u -dhac. Si aad naftaada ugu raaxaysato, waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad u dulqaadataa xayeysiisyadan aadka u gaaban ee madasha.
Kuwa kor ku xusan waa qaar ka mid ah shabakadaha aad ka daawan karto filimada masraxa iyo bandhigyada kale ee Tv -ga oo bilaash ah.
Waxaan rajeynayaa inay tani kaa caawineyso inaad sare u qaaddo waqtigaaga firaaqada.
Ku raaxayso !!!
DigitalConnectMag - 20 Goobaha Streaming Fiidiyowga Bilaashka ah ee Fiican ee Bilaashka ah oo aan Is -qorin
Cinema Hore Goobaha Streaming Fiidiyowga Bilaashka ah ee ugu Fiican No Is -qoritaan
15 Siyaabood oo lacag looga helo Tumblr
Sida Loo Helo Amazon Prime Lacag La'aan Waligeedba. 10 Talaabo oo Fudud
Sida Loo Daawado Kubbadda Kuleejka Iyadoon Cable Bilaash Lahayn | 7 Siyaabaha Sharciga ah
20 Siyaabood oo Lacag looga Helo Muusikada | Tusaha Sawirka 7aad
Faallooyinka FileYourTaxes.com ee 2022: Sharci ama Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Yaa ka fiican inuu wax ka barto kuwa soo maray oo dhan - bilyaneero! Qaar ka mid ah waxay leeyihiin…
Abeesadu waa mid ka mid ah makhluuqa dilaaga ah uguna gurguurta badan adduunka. Inta badan haweenka uurka ku jira guud ahaan…
Maalgelinta naftaada ayaa la xaqiijiyay inay tahay mid ka mid ah maalgashiyada ugu awoodda badan uguna faa'iidada badan si gaar ahaan loo sameeyo…